Soo saarista dhirta | February 2020
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan dhalmada dhirta ee cacti
Ugu Weyn Ee Soo saarista dhirta
Hababka dhalmo ee tulips, talooyin ku saabsan daryeelka xanaanada guga
Qaar badan oo naga mid ah ayaa caado u ah in ay tixgeliyaan lulaha "ubax" Maarso 8. " Haa, tani waa warshad hooseeysa, oo leh caleemo dhaadheer oo ballaaran leh, caleemo qulqulaya oo leh dhar dalool ah iyo tufaax aad u jilicsan ayaa badanaa lagu arki karaa kaararka salaanta iyo ragga rusheeysan si ay u siiyaan haweenka. Qiyaastii qof kastaa wuxuu jecel yahay tulipska.
Noocyada beerashada dayrta, sida loo daryeelo qof aan qabyo ahayn oo sariiro ubax ah
Waddanka reer miyiga ah ayaa ah Bariga Aasiya. Warshadani waa bartay aadanaha tan iyo wakhtiyadii hore, laakiin markii ugu horreysay ee sayniska bilawday dood ku saabsan taariikhda 1753. Cilmi-baaris Swedish ah ee Karl Linney ayaa ugu yeeray geedka kalluunka, taas oo isugu jirta laba eray oo Giriig ah: Hemera (maalin, maalin) iyo callos (qurux). Magacani waxaa loola jeedaa in quruxda geedka ay ku nool yihiin hal maalin.
Sida loo koro edelweiss beerta, beerto iyo daryeelidda "ubaxa buuraha"
Edelweiss daarta ubaxa waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan iyo dhifka ah ee qoyska Asteraceae. Duurjoogta, Edelweiss waxay ku koraysaa qiyaasta qiyaasta 2000 mitir ka sarreysa heerka badda. Wuxuu jecel yahay dhul bannaan oo adag. Ma taqaanaa? Edelweiss waxaa lagu sawiray dharka hubka ee Switzerland. Edelweiss wuxuu koraa illaa 15 cm, laakiin wuxuu ka kooban yahay caws badan.
Clematis ee Siberia: xulashada kala duwan, beeritaanka iyo daryeelidda warshad
Maanta waxaan ka hadlaynaa clematis sii kordhaya ee Siberia. Qeybo badan oo ka mid ah ubaxyadu waxay yaqaanaan warshadkan, laakiin qaar badan ayaa aaminsan in geedku jecel yahay jawi diirran oo aan caadi aheyn oo uusan ku korin waddooyinka waqooyiga. Waxaan caddeyn doonnaa kuwa ka soo horjeeda, dooro noocyada ugu haboon ee kugula socodsiiya shuruucda daryeelka. Noocyada Clematis ee Siberia Noocyada dabiiciga ah ee clematis yihiin kuwo aan ku habboonayn beerto ee Siberia, sidaas oo noocyo ah in ay adkeyn karaan heerkulka aad u kulul iyo qabow yihiin bred ee USSR.
Ubaxa ubaxyada ubaxa, beerashada iyo daryeelka
Ubax Geedka The Imperial Grouse waa warshad dilka ah oo soo jiidata, sidaa daraadeed aynu u eegno dhawaansho beereed, daryeel iyo dhalmo. Hazel Grouse Imperial: sharaxaad ka ah Imperial Grouse - waa gabi ahaanba ma aha warshad balbalan ah, iyo haddii la qaadayo waqtigeeda iyo si sax ah, markaa wax dhibaato ah kuma jiri doonto.
Bilowga gu'ga ee dad badan kuma xirna taariikhda ku taal jadwalka, laakiin muuqaalka kore ee ubaxa koowaad, sida narkoni. Midabada dhalaalaya ee ubaxyada jilicsan ee leh stamens waaweyn ka dib markii dhirta calool-xumada ee xilliga jiilaalka leh dogob geedaha madow taabanaya xitaa dadka aan indhaha u lahayn midabada. Doorashada meel daffodil ah Si loo beero daffodil, goob laga ilaaliyo dabaysha leh iftiin wanaagsan ayaa ku habboon.
Dhirta dhirta oo dhan, cacti waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee soo xulashada. In kasta oo xaqiiqda ah in muuqaalka ay u muuqato inuusan u muuqan mid soo jiidasho leh sida daaqada dadka kale ee cagaaran ee xayawaanka daaqada, bannaanka u door bidaan iyaga. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad warshadkan ku hesho guriga, ka dibna aqoonta hababka dhalmada ee caktus noqon doonaa mid aad u faa'iido leh.
Sameynta baqshiinka bakaylaha adoo isticmaalaya gacmahaaga
Sumatra: duurjoogta madow ee digaagga
Basbaaska madow: sifooyinka beerashada, iyo sidoo kale faa'iidooyinka iyo waxyeelada cagaarka caan ah
"Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha in aad naftaada wax u geysato! Qalabka xakamaynta qashinka waa amaan dadka iyo xayawaanka
Nertara: sidaad u daryeeli laheyd miro qallalan guriga
Ka mid ah ubaxyada ku koray Russia, Pelargonium Milfield Rose waa jacayl gaar ah iyo caan u ah beerta. Tan waxaa keena ubaxyada quruxda badan ee warshadda iyo sahlanaanta daryeelka. Maqaalka ayaa tixgelin doona sifooyinka botanical, taariikhda dhacdo, iyo sidoo kale sharaxaadda muuqaalka. Waxaynu baraneynaa sida si habboon loo daryeelo milixda milixda ee kor u kaca, iyo sidoo kale sahaminta sifooyinka wax soo saarka. Read More
Dalka Ingiriiska, wuxuu abuuray tallaal digaag ah oo ka soo horjeeda cudurada
Canab Cadaan Bianka - fasal farsamo oo heer sare ah
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Soo saarista dhirta 2020